AirPods Pro waa u adkaysta biyaha, xaaladdee ku hoos jirtaa? | Wararka IPhone
Waan qaban karnaa kuwa cusub AirPods Pro, sameecadaha dhagaha ee cusub ee Cupertino chic @ s. Dhagaha samaacadaha oo leh magaca dambe ee "Pro" oo noo keena astaamo badan oo cusub, oo ay ka mid yihiin joojinta buuqa firfircoon. Laakiin intaas kaliya maahan, waxaanan sidoo kale yeelan doonnaa markii ugu horreysay qaar AirPods leh biyo iyo u adkeysi qoyaan. Intee in le'eg ayuu iska caabintan cusub sii wadaa? boodka ka dib waxaan ku siinaynaa faahfaahinta oo dhan ...
Maskaxda ku hay in tani ay tahay wax cusub, jiilka labaad ee AirPods ma haysan wax difaac ah oo ka dhan ah biyaha. Taasi waa sababta Apple ay u horumarin lahayd ka hortagga biyuhu ee AirPod-yada cusub iyaga oo ka dhigaya kuwo xitaa iska caabiya. Si kastaba ha noqotee, horeyba waad u ogayd in Apple uusan daboolin cillad kasta oo ay leedahay biyaha, taas oo ah, haddii aad wax khalad ah ku hayso biyo, ama qoyaan, oo mid ka mid ah AirPod-yadaadu ay joojiyaan inay shaqeeyaan, waad ka tagaysaa iyaga la'aantood ... Oo haa, kuwan cusub AirPods waxay leeyihiin IPX4 caabbinta biyaha laakiin damaanad qaadka ma daboolayo burburka ka dhasha biyaha ama qoyaanka. Muxuu ka dhigan yahay qiimeynta iska caabinta IPX4?
X ka ilaalinta waxyaabaha sida boodhka ama "noole" kasta oo ka mid ah dhagahayaga, taas oo ah, runta caadiga ah ee dhagahayagu ma geli doonaan qalabka dhegaha.
4 ku buufin iska caabin ah 10 daqiiqo, taas oo ah, ka ilaalinta dhididka ama roobka marka aan isticmaaleyno.
Ma ku dabaalan karnaa AirPods Pro cusub? jawaabtu way cadahay: MAYA. Waxay ku fiican tahay Apple inay ka dhigto kuwo adkaysi badan laakiin waa inaan maskaxda ku haynaa inaysan ahayn kuwa quusin kara, way iska caabinayaan, xitaa waan ku nadiifin karnaa qoyaan yar, laakiin taxaddar iyo iyagoo halista ugu jira inay waxyeelo gaaraan anaguna waxaan ka haridoonaa damaanad la'aan Apple. Dabcan, way u wanaagsan tahay ragga ka socda Cupertino inay sameeyeen tallaabada ay ku abuureen AirPod-yada iska caabinta, hubaal waxaan ku dambayn doonnaa AirPods aan ku dabbaalan karno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » AirPods Pro waa u adkaysta biyaha, xaaladdee ku hoos jirtaa?
Nike Run Club wuxuu ka madaxbannaan yahay iPhone-ka Apple Watch